HR Coordinator for George English Training Centre | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - HR,Training & Recruitment jobs - HR Coordinator
Company: George English Training Centre
ရည်ရွယ်ချက်။	။၀န်ထမ်းအတွက် Career Path စစ်ဆေးရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Career Planning ၊ Coaching နှင့် Supporting တို့ကို အစ မှ အဆုံး အပြည့်အ၀တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန်။
၁။	၀န်ထမ်းများအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာ၊ ၀ါသနာ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အားသာချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် Career Path ကိုရွေးချယ်ပေးခြင်း။ ရွေးချယ်ထားသည့် Career Path နှင့် ကိုက်ညီသည့် Career Plan ရေးဆွဲပေးခြင်း။ရေးဆွဲထားသည့် Plan အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စအ၀၀ကိုအပြည့်အ၀တာဝန်ယူကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အကူအညီအားလုံးကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း။
၂။	သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်သူများနှင့်အလုပ်ရှာဖွေပေးရန်အပ်နှံသူများကိုသင့်တော်ကိုက်ညီသော အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်ရှာဖွေပေးရန်။
၃။	လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းများကို၎င်းတို့သတ်မှတ်စံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီစစ်ဆေးအကဲဖြတ် ရှာဖွေခန့်ထားခြင်း။
၄။	၀န်ထမ်း၏ ရပိုင်ခွင့်လုပ်ခ လစာနှင့်အခြားခံစားခွင့်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၅။	သဘောတူစာချုပ်များချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် ကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၆။	၀န်ထမ်းနှင့် အလုပ်ရှင်များကြားဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကိစ္စအ၀၀ကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၇။	အထက်ပါတာဝန်များအပြင် အထက်အရာရှိမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•	စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအထူးပြုဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိထားပြီး၊ Diploma in HRM နှင့် HRD ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
•	ပညာရေး၊ လုပ်သားဈေးကွက်နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်နှံစပ်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်စပ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ့အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ခန့်ရှိရမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍၊ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီးသွက်လက်ဖျက်လက်၍လုပ်ငန်းပိုင်းတိကျသေချာသူဖြစ်ရမည်။(Independent and self-driven team player with ability to multi-task.)
•	Internet, Email & Computer ( PageMaker,Word, Excel,Power Point)ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာရေး၊ဖတ်၊ ပြော အသင့်အတင့် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Job Category: HR,Training & Recruitment jobs
Company Industry: HR Coordinator
Job posted: 18/11/2019
•	Daily Cash Recipts အားပုံမှန်သွင်းရမည်။ •	Daily Cash Recipts Book အာ� ...
•	လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စရေးရာများဆောင်ရွက်� ...
ရည်ရွယ်ချက်။ Customer Service နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။ ကျောင်းသားအများဆုံးရရှိရေး� ...
English Language Instructor - Young Learners
•	သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရှိ� ...
Primary Teacher ( Assistant )
၁။	ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော ကာယ၊ � ...
English Language Instructor - Adult
အလုပ်၏သဘောသဘာဝ။	သင်တန်းကျောင်း၏ ညွှန်ကြာ ...
ELT Guest Trainer ( Local )
Job Description Accountabilities 1.delivering training to the highest standards of ELT 2.enhancing school’s re ...
•	စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံေ� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။Customerအများဆုံးရရှိရေးနှင့် အဖ� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။၀န်ထမ်းအတွက် Career Path စစ်ဆေးရွေး� ...
၁။	၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးကိစ္စရပ်မျာြး� ...
၁။	ကျောင်းသုံးစာရေးကရိယာများ၊ သင်ထောက်ကူပ� ...
ELT Guest Trainer ( Native Speaker )
Pre School Assistant Teacher
ရည်ရွယ်ချက်။	မူကြိုဆရာမ၏ အဓိကတာဝန်မှာ နု ...
•	ကျောင်းခွဲအသီးသီးရှိ ဆရာမများ/၀န်ထမ်းမျာ ...
•	Possess Leadership qualities and management skills. •	Strong decision making and analytical skills. •	Strong c ...
•	လူအများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့် ၀န်ဆောင်မှု ...
၁။	လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်စာချုပ်စာတမ်းကိစ� ...
Information & Registration Staff
-ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ်အလုပ်များဖြစ်သည်� ...
•	ထိရောက်သောသင်ကြားရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေး� ...
•	၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးကိစ္စရပ်များဖြ� ...
Assistant English Language Instructor - Young Learners
•	အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးအထူးကေ� ...
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ ...
ရည်ရွယ်ချက်။ ။အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်တ ...
Office supervisor ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရည်ရွယ်ချက်။	။ သ ...
Pre School Class Teacher
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ျ နှုတ်အမူအရာနူးညံ့သိမ်ေ� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။ သင်တန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကိစ� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်သည့် ( ...
၁။	Reception စားပွဲတွင် ထမင်းစားချိန်မှလွဲ၍ အချိ� ...
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ Customers အမျာဆုံးရရှိရေးနှင်� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။ အဖွဲ့အစည်း၏ HR ဌာန တစ်ခုလုံးအ� ...
၁။	Quality Assessment & Management နှင့် ပတ်သတ်သည့် ကိစ္စအ၀၀ကို ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။ စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်� ...
•	ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြ� ...
Date Posted: 14/9/2019
• ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်သော ကာယ၊ ဥာဏ၊ ...
Primary Assistant Teachers
• Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy • Bridge managemen ...
Sale, Customer Service & Information Staff
•	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ်အလုပ်များဖြစ်သည� ...
Preschool Class Teacher
•	ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော ကာယ၊ ဥ� ...
•	Finance Executive is required to study the financial transactions made by the organization and prepare financial r ...
•	၁။ သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများနှင့် အရာရှိမ ...
•	ကွန်ပျူတာ operating systems များနှင့် application များအား အသ� ...
၁။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းများရ� ...
၁။ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးကိစ္စရပ်မျာြး� ...
၁။ သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းမ ...
•	Marketing အတွက် အသုံးစရိတ်များကို ထိရောက်စွာ အေ� ...
Date Posted: 6/8/2019
•	ကျောင်းသားအများစုရရှိရေးနှင့် ကျောင်း၏အ� ...
•	Marketing အတွက် အသုံးစားရိတ်များကို ထိရောက်စွာ� ...
•	Oversee the planning and organization ofaquality primary education program in line with the organization’s guide ...
•	To perform this job successfully,the individual must be able to perform each essential duty satisfactorily.The requi ...
•	လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ� ...
Date Posted: 28/5/2019
Assistant Accountant (All Centre Income & Stock) ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ၁။ Ban ...
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ နှုတ်အမူအရာနူးညံ့သိမ့်မေ� ...